जिपीका स्वास्थ्यकर्मीमा कोरोना देखिएपछि सेवा बन्द – Sulsule
सुलसुले २०७७ असोज १५ गते १५:१४ मा प्रकाशित
उपचार केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक डा. रामकुमार श्रेष्ठले अर्को सूचना प्रकाशित नभएसम्मका लागि केन्द्रबाट उपलब्ध हुने प्रशासनिक र आइसोलेसन बाहेकका अन्य सेवा बन्द गरिएको जानकारी दिए । उनका अनुसार ती स्वास्थ्यकर्मीको कन्ट्याक्टमा आएका सबैको स्वाब परीक्षण गर्ने तयारी गरिएको छ ।
“अस्पतालका अधिकांश स्वास्थ्यकर्मी उनको सम्पर्कमा आएका छन्, सबैको शुक्रबार स्वाब सङ्कलन गर्दैछौँ,” डा. श्रेष्ठले भने, “पिसिआर रिपोर्ट आएपछि मात्रै सेवा खुल्छ ।”
आइसोलेसनलाई छुट्टै भवन : सो केन्द्रमा आइसोलेसन कक्षका लागि छुट्टै भवन निर्माण हुने भएको छ । हाल अस्पतालमा ५० शय्या क्षमताको आइसोलेसन छ । कोरोना महामारी फैलिएपछि अस्पतालको दोस्रो र तेस्रो तलामा रहेका विभिन्न विभाग हटाएर आइसोलेसन सञ्चालनमा ल्याइएको छ ।
अस्पतालको नियमित सेवा सञ्चालन गर्नलाई छुट्टै भवन निर्माण गरेर आइसोलेसन सञ्चालन गरिने अस्पतालका कार्यकारी निर्देशक डा. श्रेष्ठले राससलाई बताए । आठ कोठाको नयाँ भवन निर्माणका लागि टेन्डर आह्वान भएर मूल्याङ्कनको चरणमा रहेको उनले जानकारी दिए ।
सङ्घीय सरकारले ५० शय्या क्षमताको आइसोलेसन भवन बनाउन रु. एक करोड बजेट पठाएकामा अपुग हुने भएपछि ३० शय्याको आइसोलेसन बनाइने श्रेष्ठले जानकारी दिए ।
वित्त र मौद्रिक नीतिमा ल्याइएका कार्यक्रमहरुको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्छौँ :…
गाउँमै प्रसूति सेवा
ड्राइभिङ पेसा छाडेर भैंसी फार्म
कैलालीमा जन्ती चढेको गाडी दुर्घटना, बेहुलाबेहुलीसहित १३ घाइते
वैदेशिक रोजगारीका नाममा मानव तस्करी बढ्दै